Wayyaaneen basaastota ishee Dambi Doolloo fiddee fuula Facebook qeerroo Kichuu
HomeAfaan OromooRadioWayyaaneen basaastota ishee Dambi Doolloo fiddee fuula Facebook qeerroo
1 Gumaa Guddaa
4.Chilimo Forest jedhaman basaasuf Namotaa Cayber security baratan fiddee jirti. basaastoota nama
(70) fiddee akka jirtu bira geenyee jirra. Fb kenyaa argachuu Jechuun samiitti Ol dhukaasuu akka ta’ee Hubadhu waan Duraan ta’ee isinis beektu nus beekna. uttuu dhigi kee dhigaa warra si fakkaatanii hin ta’in Dafii Deemi Namotaa kana Hordofaa jirra. Nun Dandeettii %100 akka isin caallu isinuu ni beektu. kanaaf Fuulaa Fb keenyaa argachuu ciqilee keessan dhungachuu akka ta’e Hubadhu sin miti warri Adii nuun Hordofuu dhufteeyyuu gatii ishee argattee Debite. warri amma nun hordofuu dhuftanis gatii kessaa ni argattu !!!!!!
Abbaan torbee magaalaa Anfillootti basaastuu wayaaneerratti ebila 16,4,2018 galagala kana naannoo sa’aa 2:00tti tarkaanfii fudhate.
Tigireen Tasfaayee jedhamu har’a galgala Abbaa torbeen tarkaanfiin irratti fudhatame qeerroo magaalaa sanaa hedduu basaasuun harka diinaattii dabarsee kennaa kan ture akeekkachiisa yeroo hedduu itti kennameen deebi’uu waan hin dandeenyeef tarkaaanfiin madaalaawaa irratti fudhatameera.
Yeroo ammaa kana buufata fayyaa magaalaa Anfilloo seenee jiraachuu maddi keenya ni addeessa.Lubbuun darbeefi hafuusaa hordofnee isiniin beeksisna
Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 16 April 2018